Tag: akwụkwọ ịma ọkwa | Martech Zone
Tag: akwụkwọ ịma ọkwa
Anyị na-elegharakarị ohere ịzụ ahịa ndị a na-ahụ anya, anyị anaghị aga otu ụbọchị ma ọ bụrụ na anyị ahụghị ha. Ahịa n’èzí na bọọdụ mkpọsa bụ otu n’ime atụmatụ ndị ahụ. Dika otutu uzo ahia ahia, enwere uzo di iche iche na ohere di iche iche nke ndi ozo apughi inye. Ma nye usoro dị ukwuu, nloghachi na itinye ego na ya nwere ike karịa ọwa ahịa ndị ọzọ. Billboards nwere ike inwe nnukwu mmetụta maka azụmaahịa na ụlọ ọrụ niile. Na ozi infographic a site na Signarama
Ezigbo enyi Chris Reed nke Cast A Nnukwu Net mere ka m jụọ ma ọ bụrụ na m gbalịrị Canva ma ọ gwara m na m ga-ahụ ya n'anya. Ọ bụ nnọọ nri… M na-messing ya maka a di na nwunye awa ugbua n'abalị ikpeazụ. Abụ m onye na-agba ama nke Illustrator ma jiri ya ọtụtụ afọ - mana m na-eche ihu. Ekwenyere m na m maara ezigbo atụmatụ mgbe m hụrụ ya, mana m na-enwekarị